Manchester United oo guul soo laabasho leh ka soo gaartay kooxda Brighton… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye September 26, 2020
(England) 26 Sebt 2020. Manchester United ayaa guul soo laabasho leh ka soo gaartay kooxda Brighton & Hove Albion oo ay ku booqatay garoonkeeda The American Express Community, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 2-3, xilli Red Devils ay gacanta ku dhigtay saddexdeedii dhibcood ugu horeysay horyaalka Premier League, kal ciyaareedkan cusub ee 2020/21.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbardhac 1-1 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Brighton & Hove Albion iyo Manchester United.
Daqiiqadii 40-aad kooxda Brighton & Hove Albion ayaa heshay riggoore waxaana gool u badelay xiddigeeda Neal Maupay, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1-0.
Laakiin daqiiqadii 43-aad kooxda Manchester United ayaa heshay goolka barbardhaca kaddib markii uu gool iska dhaliyay daafaca kooxda Brighton ee Lewis Dunk, dheesha ayaana sidaas ku noqotay barbardhac 1-1 ah.
Alla muxuu gool ahaa, Daqiiqadii 55-aad Manchester United ayaa la wareegtay hoggaaminta ciyaarta waxaana 1-2 ka dhigay Marcus Rashford, kaddib markii uu shabaqa Brighton dhax dhigay kubadd aad u qurxoon oo ka caawiyay saaxiibkiis Bruno Fernandes.
Daqiiqadii 90-aad kooxda Brighton & Hove Albion ayaa heshay goolka barbardhaca waxaana 2-2 ka dhigay laacibkooda Solly March.
Balse Manchester United ayaa isla 90-ka daqiiqo loo dhigay rigoore waxaana gool u badelay xiddigooda reer Portugal ee Bruno Fernandes, wuxuuna dheesha ka dhigay 2-3.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-3 ay ku adkaatay Manchester United oo ku booqatay kooxda Brighton & Hove Albion garoonkeeda The American Express Community, waxayna Red Devils gacanta ku dhigtay saddexdeedii dhibcood ugu horeysay horyaalka Premier League, kal ciyaareedkan cusub ee 2020/21.